UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UNkulunkulu akanandaba nokuthi umuntu uthobekile noma mkhulu.
Uma nje ezwa uNkulunkulu,
elalela lokho uNkulunkulu akuyalayo nakunikezayo,
ekwazi ukubambisana nomsebenzi Wakhe, nohlelo Lwakhe nentando Yakhe,
ukuze intando nohlelo Lwakhe kungaqhubeka ngaphandle kokuphazanyiswa,
lokhu kwenza kukufanele, kukufanele ukukhunjulwa nguNkulunkulu,
futhi kufanele ukuthola, ukuthola isibusiso Sakhe.
UNkulunkulu uyabazisa abantu abanjalo, futhi uyazazisa izenzo zabo,
nezinhliziyo kanye nokumthanda kwabo.
Yilesi isimo sengqondo sikaNkulunkulu.
Okwedlule：Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune